စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် လူပေါင်း ၅၇၀၀၀ သူဌေးဖြစ်သွားပီ...။ ချမ်းသာသွာပီ...။
စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်တယ်။ လူတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေရတယ်။ တနည်း ငတ်နေရတယ်။ ထောင်တွေထဲမှာ ဘ၀တွေပျက်စီး၊ ချိ..နဲ့ အီး, ထွက်တာတွေအများကြီးပါ..။ ပြည်ပ နိုင်ငံတွေမှာ Brain drain အုံးနှောက်တွေဟိုရောက် ဒီရောက်လေလွှင့်မှု၊ ဒါ့အပြင် Mussel Drain ကြွတ်သားတွေရွှေလျှားမှု၊ ဟာ...အများကြီးပဲ...မရေးတက်တော့ဘူး..။ ဒါတွေဟာ အုပ်ချုပ်သူတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာ။
ဥပမာ...ရုရှက ဗိုလ်ကြီးတွေ(ဗိုလ်မှုးမရှိဘူးလို့တစ်ယောက်ကပြောလို့ပါ)လစာနည်းနည်း၊ မသေရုံတမယ် ရုရှမှာ ပညာသင်ကြားရတာတွေဟာ အုပ်ချုပ်သူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာ..။ တကယ်တမ်းက သူတိုက တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ရတဲ့ စစ်အရာရှိတွေမှတ်လား ပိုလို့တောင်ခံစားခွင့်ရှိရအုံးမယ်။ အသက်ပါစွန့်လွှတ်ထား ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါလား...။ ပြီးတော့လည်း သူတို့ပညာတက်တွေလေ...။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသမီးတစ်ယောက် ရေမွေးဝယ်တဲ့ဈေးက ရုရှကစစ်ဗိုလ်တွေလစာဒေါ်လာ နှစ်ရာထက်များနေတာကို မသိကြတာ မဟုတ်ပါ ဘူး...သူတို့သိပါတယ် (ကိုမိုးသီးအတင်းအဖျင်းဆိုက်မှ)။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်မှာ သူတို့တတွေဟာ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်စီးမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး...။ ကယ်မဲ့သူတွေပါ..။
စစ်အာဏာရှင်လက်အောင်မှာ အကျိုးအမြတ်ရတဲ့သူတွေထဲမှာပါ ပြည်သူတွေလည်းပါတယ်။ ဘယ်သူတွေလဲ... အရင်ကြည့်ရအောင်..။ ဥပမာ..သတင်းတခုအရ အမေရိကန်အပါအ၀င် တတိယနိုင်ငံတွေကိုမြန်မာ လူမျိုးဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅၇၀၀၀ ကိုအခမဲ့ပို့ပေးခဲ့တယ် (ကုလားပြည်အခြေစိုက်သတင်းဌာနမှ) ။ဒါဟာ စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တခုပါ...။ စစ်အာဏာရှင်မရှိရင် မြန်မာတွေလည်း ထိုင်းတွေလို အဖြူကိုယူပြီး လာကြရမှာ..။ အခုတော့ အခွင့်ထူးရသလိုမျိုး...မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ လေယျာဉ်ခမကုန်၊ စားဖို့နေဖို့အဆင်သင့်။ကံကောင်းတယ်။ ဒါတွေကိုစစ်အာဏာရှင်ကြောင့် ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတခုပါ။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်...ဘဘရွှေတို့ရယ်...။
တခါက မလေးရှားကိုရောက်တော့ မလေးရှားမှာယူအန်လျှောက်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသား လူမျိုေးတွ...။ သူတို့လျှောက်လွှာမှာရေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့တယ်။ သူတို့အများ စု(အားလုံးနီးပါ)ဟာ တိုင်းပြည်မှာငတ်နေလို့မလေးရှားက အောက်လမ်း၊ အထက်လမ်း(ဆေးကုတာမဟုတ်) ကနေလာကြတာပါ။
လျှောက်လွှာမှာရေးတာက ၊ရခိုင်၊ မွန်၊ ချင်း၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင် မုဒိမ်းကျင့်လို့၊ ရွာမီးရှို့ လို့၊ ဘုရားကျောင်းအပါအ၀င်၊ မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်...စသဖြင့် ရေးကြတယ်..။ မလေးမှာ ပြောနေကြ..စကားရှိတယ်။
ချင်းလူမျိုးတွေဆိုရင် အပျိုမရှိတော့ဘူး။ အားလုံးမုဒိမ်းကျင့်ခံလို့...မြန်မာစစ်သားကကျင့်တာပါ။ (ဟီး ....ဒို့စစ်သား အလကားနေကံကောင်းတယ်)။ ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့မသိဘူး...တခါက ချင်းယောက်ျားလေးကပါ စစ်တပ်က မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်ဆိုပီးယူအန်လျှောက်တော့ ယူအန်ကလည်း အအောင်ပေးပါတယ်.။။။ ထိုင်းမှာ လည်းဒီလိုမျိုးပါ။ UNHCR နဲ့ သံရုံးတွေလည်းအလိမ်ခံရတာကို သိပါတယ်။ ဟားဟား...ဒါမှဒို့မြန်မာ ကွ...မြန်မာ နိုင်ပီ...။
တကယ်တမ်း တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု့ကြောင့် ပြန်လို့မရတဲ့လူတွေဟာ နည်းပါတယ်။ ဒီလောက်မများပါဘူး...။ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ ယူအန်နဲ့သံရုံးကို လိမ်၊ စစ်အစိုးရကိုအပြစ်ပုံချ...ဒါတွေအများကြီးပါ...။ နိုင်ငံခြားရောက်ပီး သုံးလေးနှစ်နေ၊ ငွေစု ပြီးရင် ပြည်တွင်ပြန်သွား...စစ်အစိုးရကောင်းကြောင်းပြန်လိမ်.. .အတိုက်အခံမကောင်းကြောင်းပြန်ပြော...ဒါတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ဟဲ..ဟဲ..(မင်းအပါအ၀င်မှတ်လားလို့မပြောနဲ့)။ ခြုံပြီး ပြောရရင် ဂုန်နီအိတ်ဟာအနွေးဆုံး ပါ(အဲလေယောင်လို့). ..စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ပြည်သူတွေတချို့ အကျိုးအမြတ်ရတဲ့ဥပမာတခုပါ...။
ဥပမာ...သြစီကို အထက်ကပြောသလိုလိမ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်ပီဆိုရင်...မြန်မာပြည်မှာ မတွေ့ဘူး၊ မမြင်ဘူးတဲ့အစားအစာကို တဖြဲနှစ်ဖြဲစား...၀ါး...။ ရေခဲသေတ္တာဟာချိုနဲ့လားဆိုတဲ့လူမျိုးက အလကားရတဲ့ ရေခဲသေတ္တာတွေ့ပြီးငါတော်တော်ချမ်းသာသွားပြီလားဟ..လမ်းဘေးစွန့်ပစ်ကားမစီးချင်တော့ဘူး...ကားအသစ်မှ...။ ဟာ..မျက်စိတော်တော်နောက်တယ်။။ ဒါတွေဟာ သူတို့ကြောင့်၊ သူတို့အရည်အချင်းရှိလို့ရတာ မဟုတ်တော့ ဘူး...စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်။ ကျေးဇူးသိတက်ရမယ်နော်...။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ...ဒီလို...တခါတလေတွေးမိတယ်။ သူတို့အီးပေါက်တာတောင် အတိုက်အခံ ကြားရင်. .ပြည်သူကို နံစေချင်လို့ ပေါက်တာလို့ဆိုပီး အလကားနေအပြစ်တင်ခံရတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်နေပီ...။ ဘာဘဲလုပ်လုပ် အကောင်းမမြင်တော့ဘူး...သနားပါတယ်...။ (မဆဲနဲ့နော်..သနားရင် မင့်နှမနဲ့ပေးစားလို့ပြောအုံးမယ်)
ကဲ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ....တဘက်က စစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တိုင်းပြည်ပျက်တယ်၊ တဘက်က စစ်အာဏာရှင် ကြောင့် ပြည်သူတွေမရောက်ဘူးတဲ့နေရာ...မစားဘူးတဲ့အရာ...မတွေ့ဘူးတဲ့အရာတွေကို အလကားမြင်ရ တွေ့ရစားရနေရကြောင်းပါ...။
သြော်...ငါတို့ဗမာတွေ အလိမ်တော်ပါလားနော်...။ ဗိုက်ခေါက်ကိုပြောတာပါ။
၁) ရွာသူကြီးမှ ချီးမြှင့်သောရွှေတံဆိပ်ဆုရ ကုလားပြည်အခြေစိုက်ပြည်ပသတင်းဌာန။
၂) အလိမ်ခံရသော မလေးရှားအခြေစိုက် UNHCR လျှောက်လွှာဌာန။
၃) မလေးရှားကို စော်ငန်းထွက်သောခရီးစဉ်မှ မှတ်တမ်းဒိုင်ယာရီ။
၄) အတင်းအဖျင်းများစုံသော လူဆိုးဗိုလ်ကိုမိုးသီး ဘလော့ဂ်။
၅) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံညွှန့်ပေါင်းခိုးကြ..(အဲ..မှားပြန်ပီ)..အစိုးရ၏ Update မလုပ်သော ၀က်ဆိုက်။
၆) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လိမ်၊ ကြွားရေး ၀န်ချီးဌာန(ပြန်ကြားရေးမဟုတ်) ၂၀၁၀ မှတ်တမ်း။
ဆရာကြီး ငပေါ ဘုန်းကျော်(မျှောက်ပေး..ဂွေးတက်အောင်က)
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, January 14, 2010